Izinkinobho Ezihlanganisiwe Zenayiloni, I-Nlondi Ehlanganisiwe Yesikhumba
I-Threaded Inayiloni Ehlanganisiwe
Intambo yokuthunga enhlanganiswe yeNylon yenziwe nge-polyamide 6.6 fiber synthetic, igama elidumile i-Nylon 6.6 noma i-6 synthetic fiber, ngenqubo ekhethekile yokuhlanganiswa ngenkathi isonteka ifayibha, bese inamathela iphothule yonke imicu ndawonye njengenye, ngenkathi kuthungwa, intambo ehlanganisiwe ayiphikisi , hhayi i-cottony, ukumelana okukhulu ne-abrasion.
Ukucaciswa: 210D/3, 300D/3,420D/3 ,630D/3
Isici somkhiqizo: I-Tenacity enhle kakhulu, ukuvikelwa okuhle kwe-UV nokuhlukumezeka, ukuthambisa kancane, indawo ephakeme engamanzi, imigqa yokuvulwa okuqinile, amandla amakhulu nokubukeka okuhle, ukubukeka okubanzi kwemibala
Umphumela wokuthunga umangalisa kakhulu, ngenxa yenzuzo yezinto ezibonakalayo ze-nylon kanye nokulahlwa okusebenzayo kokuthambisa, kusebenza kuzo zonke izinhlobo zezimpahla zesikhumba, isikhwama & nemithwalo, izitolo zokudla, imikhiqizo yangaphandle, njll.
I-100D / 3, i-150D / 2, i-150D / 3, esetshenziselwa ikakhulukazi izinto ezenziwe ngesikhumba sendwangu: njengamawallet, amakhethini, izikhwama zezandla, ama-raincoats, izingubo zesikhumba, amagilavu ​​wesikhumba, njll.
I-210D / 2, 210D / 3, 250D / 3, Kakhulu esetshenziswa kwimikhiqizo yesikhumba neyesikhumba: njengezicathulo zesikhumba, izikhwama zesikhumba, amasudu, izembatho zesikhumba
Izindwangu zeTicker: i-floss yamazinyo, izicathulo zokuhamba, izikhwama zokuhamba, amatende, ama-sofas endwangu, okombhede, amasofa, njll.
I-300D / 3, 420D / 3, 630D / 3, esetshenziselwa ikakhulukazi imikhiqizo yesikhumba esindayo: amasofa, izihlalo zemoto, izicathulo zezemidlalo, amabhande, njll.
Imikhiqizo yendwangu emincane: i-canvas, incwadi ye-akhawunti, itende, ibhulukwe, njll. Imikhiqizo ethunyelwe ngesandla, amakhayithi, amakhethini obuhlalu.
I-840D / 3, 1260D / 3, esetshenziselwa kakhulu ama-kites amakhulu, imikhiqizo eyenziwe ngomthungo, izikhwama zokufaka, njll.
1260D / 3 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi
840D / 3 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi
I-210D / 4 Thread Threaded Thread
210D / 2 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi
138D / 3 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi
100D / 3 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi
I-420D / 3 100% Ingxube ehlanganisiwe yenyoni
250D / 3 100% I-Nylon Bond Thread
I-210D / 3 Thread Threaded Thread
120D / 3 Inhlanganisela Yensimbi Yensimbi